ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား? အလုပ်အကိုင်ရတဲ့အတှကျခြေလှမ်းများ! 🥇
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်ဂျော့ - သူ Work များအတွက်လမ်းညွှန်
ဧပြီလ 25, 2018
ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား ?. ဒါဟာသင်ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှ Moving ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုဈေးကွက်ထဲမှာအတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူ။ အခုတော့ထား ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရှာကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ သငျသညျနောကျလိုကျဖို့လိုအပျဤမျှလောက်များစွာသောနည်းနည်းအမှုအရာရှိပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေနေ သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်သည်အလွန်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်များအတွက်ပြင်ဆင်ကြ၏။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအသိအမှတ်ပြုရန်အသစ်ပြည်တော်ပြန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင့်ထံမှလိုအပ်ပါလိမ့်မည် Z ကိုသတင်းအချက်အလက်မှတစ်ဦးကိုသင်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားလာသောအခါ။ အားလုံးနည်းလမ်းများဖြင့်, သင်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပရှိဖြစ်လာချင်ပါတယ်လျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရန်လိုအပ်မည် ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားဘို့ 10 ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အမြဲ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများမှလက်ပေးခြင်းအဘူဒါဘီနှင့် Sharjah ။
တော်တော်များများရှိပါတယ် အွန်လိုင်းအချက်အလက်များ၏ခေတ်မမီတော့အပိုင်းပိုင်း။ အထူးသဖြင့်အလုပျအတှကျဒူဘိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုဟောင်းဘလော့ဂ်များပေါ်မှာ။ အထူးကုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမျှော်လင့်နေပါတယ် သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်တကွသင်ကူညီခြင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နိုင်ခဲ့သည်။ နေသရွေ့ ယူအေအီးအစိုးရအနေဖြင့်ဗီဇာရရှိရန်မည်ကဲ့သို့။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်ထို့အပြင်ဘယ်လောက်နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတှငျနထေိုငျဖို့အပြားကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လို။ ဤသည်ကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်အဓိကအားဖြစ်ပါသည် ပြည်ပမှာနေထိုင်နေနှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာနေကြသူလူများအတွက်.
No.1 ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်သိရန်ရယူခြင်း Step
ဒူဘိုင်းမွကွေီးပျေါမှာအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ သငျသညျဒူဘိုင်း၏စီးတီးတည်ရှိရာကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံး likeable ဘာလဲ ?. ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, မြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာ ?. အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးသင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကောင်းစွာသိသည်။ ထို့အပြင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ ယူအေအီးသည်ဧည့်သည်ကြိုဆို။ နှင့်သင်တန်း၏, ပါကစ္စတန်ကနေမွတ်စလင်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ဒူဘိုင်းရက်ရက်ရောရောချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဧည့်သည်များအတွက်ယဉ်ကျေးမှုလောကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်နောက်ထပ်အရာယူအေအီးထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသည် အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရောင်ခြည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အတွက်ဒီချမှတ်သင့်ပါတယ်။ အောက်ကပုံထဲကပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအသင်လိုအပ်သောအရာကိုအထဲကရှာတွေ့ ဒူဘိုင်းအကြောင်းကိုသိရန်. ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား?။ သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာဒါဟာတကယ်အားလုံးမူတည်ပါသည်။ ဥရောပနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံမှလူများအများစုကဗီဇာရနိုင်ကြသည်။ အများကြီးပိုခက် ဒါကြောင့်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်အဘို့ဖြစ်၏.
No.2 ယူအေအီးနှင့်ဗီဇာသတင်းအချက်အလက် Step
တူညီစွာ ဒူဘိုင်း သိ. ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဝင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်သိရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, သင်ပင်ယူအေအီးမှခရီးသွားအစီအစဉ်မတိုင်မီ။ သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များစစ်ဆေးရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကစမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သေချာထက်ပိုတရာရာခိုင်နှုန်း Be သငျသညျလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်ပါတယ်.
ငါအဘို့အဗီဇာလိုအပ်ပါသလား စော်ဘွားနှင့်အတူဒူဘိုင်း?။ ဟုတ်ကဲ့, သင်ယူအေအီးအတွက်ဆင်းသက်သည့်အခါသင့်လက်၌အဆင်သင့်တဲ့ဗီဇာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျယူအေအီးဗီဇာသတင်းအချက်အလက်များမှာလျှောက်ထားပြီးကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းသင်တို့အဘို့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုနေရာချပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအလွန်ဂရုတစိုက်ဖတ်, သင်ခရီးသွားလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိုအဘယ်အရာကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံအများစုမှာ လိုအပ်ပါကခိုင်လုံသောဗီဇာရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်။ နှင့်ခြောက်လတစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့အခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် Non-စံနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ကိုင်ဆောင်သူလည်းရှိပါတယ်။ ဒီခြေလှမ်း၌ဤအကြောင်းကြောင့် သင့်ကိုအစဉ်ကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာများသေချာအောင်။ ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပျနိုငျသောအရာကိုခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးပါ။ စော်ဘွားမှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ်ကိုလည်းသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော entry ကိုလိုအပ်ချက်များကိုပိုင်ဆိုင်ရှိသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒီခြေလှမ်းအတွက် လမ်းလျှောက်-in ကိုဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးကိုလည်းထုတ်စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး။ သငျသညျယူအေအီးရိုက်ထည့်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်မယ့်ဗီဇာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကဘာလဲ။ ဒါ့အပြင်အခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဖတ်ရှု ယူအေအီးအတွက်လိုအပ်ချက်များကို.
အဆင့်ဗီဇာအမျိုးအစားများကို Check No.3
ခြေလှမ်း No.3 ငါတို့သည်လိုအပ်ပါတယ် ကျနော်တို့ရှိနိုင်ပါသည်ဗီဇာအမျိုးအစားထွက်ရှာရန်။ ဥပမာ, ကြှနျုပျတို့ရှိနိုင်ပါသည် - long-term တစ်ခုတည်း entry ကိုဗီဇာ-ခရီးသွားဧည့် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့။ နှင့် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီဇာအပေါ်။ အဖြစ်ရိုးရှင်းအားလပ်ရက်ရည်ရွယ်ချက် 30 ရက်ပေါင်းနှင့် 14 ရက်။ ဤအချက်များ, အလည်အပတ်ခရီး government.ea ပေးထား တာဝန်ရှိသူတဦးကပေါ်တယ်။ သငျသညျဆည်းပူးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အားလုံးအကြောင်းပါနိုင်သလဲဆိုတာကိုဗီဇာကြည့်ရှိသည်။ ဖို, သင်ကဖြတ်လမ်းရှိနိုင်ပါသည် ဗီဇာကြာချိန်များအတွက်.
ငါသည်အဘယ်သို့ pater ရှိသင့်, ဒါမှမဟုတ်ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား ငါသွားမတိုင်မီ ?. ကြောင်းအားလုံးသည်သင် Government.ae က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူရှာတှေ့နိုငျမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ သငျသညျအများအပြား options များရှိသည်, သငျသညျအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရှိသင့်။ အထူးသဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းအကောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်များမှဖြစ်ပါသည်။ နှင့်ယူအေအီးအစိုးရထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရာမရှိ။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေသည်သင်၏အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအချက်အလက်ရှာတွေ့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Government.ae က်ဘ်ဆိုက်၏ဖြစ်ပါသည် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူသစ်ကိုဧည့်သည်များကူညီယူအေအီးနေနှင့်အလုပ်လုပ်.
ရေရှည်ခရီးသွားဗီဇာ - အလွန်အမင်း အသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကြံပြု !.
30 ရက်တိုးချဲ့နိုင်သည့် 40 ရက်ကြာခရီးသွားဧည့်ဗီဇာ, - အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအဘို့အကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။
14 ရက်ကြာ Service ကိုဗီဇာ, ရုံအားလပ်ရက်များအတွက်မဟုတ်ပါပြည်တော်ပြန်များအတွက်.
30 နေ့ရက်ကာလအဘို့တိုးချဲ့နိုင်သည့် 30 ရက်ကြာခရီးစဉ်ဗီဇာ။
ok, ငါတို့ယခုသိကြ သငျသညျဒူဘိုင်းရိုက်ထည့်နိုင်လျှင်။ သင်ပင်အားလုံးဗီဇာနှင့်အတူအကြောင်းကိုသိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ ကျနော်တို့နောက်ကိုလိုက်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရိုက်ထည့်ရန်ဗီဇာဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ကြောင်းပေါ်တာရှည်သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါအလွယ်ကူဆုံးဘွတ်ကင်စနစ်အ Etihad ယူအေအီးဗီဇာစနစ်ဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်လျှင် ယူအေအီးကနေ အစိုးရစာရင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အကယ်. သင်သည်ဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူး ယူအေအီးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုတင်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျမှာဆင်းသက်လျှင် အဘူဒါဘီနိုင်ငံတကာလေဆိပ်။ မိနစ်အနည်းငယ်မှာတော့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းလိမ့်မည် သင်တို့အဘို့အကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ထိုအခါအခိုက်၌သင်တို့ကိုဆိုက်ရောက်အပေါ်ဗီဇာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Etihad Do ပျံသန်းဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကျွန်မလိုအပ်နေချိန်မှာ ဒူဘိုင်းဘို့ဗီဇာ?။ သင်သာသင်တစ်ဦးဗီဇာရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပျံသန်းဖို့စီစဉ်ကတည်းက။ သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်သောအခါသင်ကလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာ, သင်အွန်လိုင်းကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကပင်ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ် ယူအေအီးလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်.
ဒါပေမယ့်လည်းအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာကြည့်ရှိသည်။ စမတ် Be နှင့်စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်။
ဒူဘိုင်း Etihad ယူအေအီးမှ Moving ဗီဇာဘွတ်ကင်စာမျက်နှာ
FlyDubai ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားခြင်းနှင့် ယူအေအီးအဘို့ဗီဇာအကူအညီနဲ့
No.5 Step ဒူဘိုင်းအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖို့နေရာရှာပါ
သငျသညျဒူဘိုင်းကိုသွားမီ။ သငျသညျကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတိုက်ခန်းများအာရုံစိုက်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ကအလွန်စျေးပေါတဲ့အခန်းကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျယ်ဝန်းတဲ့အခန်းဟာမဖြစ် သငျသညျယူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုရိုက်ထည့်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ယူသင့်ရဲ့မိသားစုမပါဘဲမရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာသူတို့သာအသုံးစရိတ် generate ပါလိမ့်မယ်။ အလွန်အစအဦးမှာ, သင်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားလာသောအခါပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထိုကဲ့သို့သောမလေးရှားအဖြစ်နိုင်ငံအများကနေ သို့မဟုတ်အိန္ဒိယ။ သငျသညျအပြားသို့မဟုတ်အခန်းလုပ်နိုင်အဖြစ်လျော့နည်းအဖြစ်သုံးပါ။ သငျသညျပိုကောင်း shared နေရာထိုင်ခင်းကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအီးမေးလ်ဖြင့်ပြားပိုင်ရှင်တွေသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မခေါ်နိုင်ပါ။ သငျသညျအရပျ၌အရာခပ်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ရှေ့မှာ သငျသညျယူအေအီးမှရွှေ့မည်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းသောအကြံပေးချက်များအဘူဒါဘီအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှာဖြစ်ကြပြီး ရှီး။ အတွက်ငှားဖို့အများကြီးစျေးသက်သာတိုက်ခန်းရှိပါတယ်။
ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား ?. ဟုတ်ကဲ့, သင်ကလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, နှင့်တစ်ဦးအစွန်အဖျားလည်းမရှိ။ ပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်လုပ်ဗီဇာရဖို့ရန်။ သင် ... နိုင်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထား။ သငျသညျကောင်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းရှာတွေ့ဘို့တိုးမြှင့်ဤနည်းလို့ပဲ။ ကုမ္ပဏီများကအများကြီးပိုရန်ပုံငွေများရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည်ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သငျသညျငှားရမ်းရန်။ စိတ်၌ဤအတူသစ်ကိုနေရာထိုင်ခင်းအဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
No.6 ဒူဘိုင်းနှင့်စာအုပ်ဒူဘိုင်းမှလျှော့စျေးလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှ Moving Step
ငါတို့ရှိသမျှသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စျေးပေါမဟုတ်သိ အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက်။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်သကဲ့သို့အနိမ့်သည်သင်၏အသုံးစရိတ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးလျှော့စျေးပျံသန်းမှုကိုရှာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းဆဲအဓိကမြေပြင်ဖြစ်နေဆဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ဘို့။ သင်တို့မူကားအဘူဒါဘီဖို့လည်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းက Moving အမြဲစျေးကြီးသည်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲရှည်လျား သငျသညျအကွံဉာဏျ၏-bits ရှာဖွေနေပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျအခြို့သောပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သငျသညျယူအေအီးအတွက်ဆင်းသက်သည့်အခါ။ သငျသညျအရပျ၌ကရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတှငျနထေိုငျ။ ယူမယ့်စျေးပေါသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျဒူဘိုင်းလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ကတည်းက။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအဆင်သင့်ရနျလိုအပျ အလုပ်ရှာဖွေဘို့သွားကြဖို့။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့တစ်နည်းနည်းကိုလမ်းပြ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာတော့နှစ်ခုအဓိကမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Etisalat နှင့် du, နှစ်ဦးစလုံးကောင်းပါတယ် သစ်တစ်ခုပြည်ပရှိအဖြစ်သင်တို့အဘို့ သငျသညျဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားလာသောအခါ။ အားလုံးသင် Pre-paid မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်သောအရာကိုမူတည်ပါသည်။
မရှိပါအများကြီးခြားနားချက်မိုဘိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ယူအေအီးအတွက်။ နှစ်ခုအော်ပရေတာများအကြားအဓိကကွာခြားချက်ကမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေး du ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သာဒုတိယအားဖြင့်စွဲချက်အသုံးပြုသူများသည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, Etisalat တစ်မိနစ်လျှင်တိုင်းအသုံးပြုသူအားသွင်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သငျသညျစိတျပူစရာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးသည်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ကယ်တင်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ နောက်ထပ်အကြံပေးချက်များကိုသူတို့မသာယူအေအီးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အများကြီးလည်းရှိပါတယ် ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအလုပျသမား အဘယ်သူသည်လက်ရှိတွင်ကြောင့်အသုံးပြုနေသည်။
ဖုန်းကိုထားရှိခြင်းသည်ကိုယ့်ဒူဘိုင်းတစ်ဗီဇာလိုအပ်သလား ?. ဟုတ်ကဲ့ ... ဤနေရာတွင်သင်က2အဓိကအော်ပရေတာရှိသည်။
ဒူဘိုင်းတွင် Etisalat မိုဘိုင်းဖုန်းများ
ဒူဘိုင်းအတွက် du မိုဘိုင်းဖုန်း
No.8 ဒူဘိုင်းဘို့သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်ပြင်ဆင်နေ Step
မန်နေဂျာများဌားရမ်း ဒူဘိုင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ CV ကိုရှာဖွေနေ။ သို့သော် 2-5 ဒုတိယပတ်လည်ရှိအနုတ်လက္ခဏာဘက်အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့အံ့သြဖွယ်များနှင့်အစက်မရှိသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်စကားများမှာတော့သင့်ရဲ့ CV ကို 2-3 စာမျက်နှာများထက်မပိုဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်သာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းအချက်အလက်ပါဝင်ရမည်။ အခြေခံ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အရေးအသား Forbes.com အားဖြင့် posted ထားပြီး ပတ်ပတ်လည်ကြီးမားတဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ် 2018 နှင့် 2019 အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အဘယ်အရာကိုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရေးသားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင့်တယ်မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်ဤဆောင်းပါး၌ပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် CV ကိုအရေးအသားအချို့ချွင်းချက်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်လျှင် ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းအဆင့်ရာထူးလျှောက်ထား။ တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်ထူးခြားသောလမ်းရှိပါသည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အခြေအနေများရှိလျှင် အလုပ်အဘို့အလိုအပျ။ သငျသညျ3စာမျက်နှာများရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တက်တိုးချဲ့သင့်ပါတယ်။ အချိန်ကနေကမ်ဘာပျေါတှငျနိုင်ငံများတွင်အချို့အတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိခြင်း။ အဆိုပါ CV ကိုရဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အထဲကတချို့ဟာဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းကြည့်ရှိသင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Forbes မဂ္ဂဇင်းစုံလင်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့သင့်ကိုလမ်းပြ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ CV ကိုအရေးအသားအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Peopleperhour CV ကိုစာရေးဆရာများ။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းသော CV ကိုစာရေးဆရာအဘို့အလှည့်ပတ် $ 30 များအတွက်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့သင်တို့အဘို့အလမ်းများလွန်းလျှင်။ သင်လုပ်နိုင်သည် Fiverr.com အပေါ်လျော့နည်းအဖြစ် $5အဖြစ်အသစ်သော CV ကို get။ သင့်လျော်၏ CV ကိုရဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်ကိုယ်သင်ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Independent.co.uk ရှိအောက်တွင် နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်.
No.9 လူမှုရေး profile များကို Creating Step
သင်ကိုသွားခင်မှာ လာမယ့်ခြေလှမ်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား Start။ သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူမှု profile များကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းဖန်တီးခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကဲ့သို့ရှည်လျားသော တစ်ခုချင်းစီကိုစုဆောင်းပေါ်တယ်သည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း Top-rated လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်နေရာချကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာ။ အဘယ်သူမျှမမှော်ရှိပါတယ် နိုင်ငံခြားသားများရှာဖွေသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သော့ချက်။ ဒီခြေလှမ်းနှင့်အတူသငျသညျအသီးအသီးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအလွန်အသေးစိတ်ပရိုဖိုင်းကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ညာဘက်လုပ်နဲ့လာမယ့်နောက်ဆုံးကိုသွား သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား? ပင် LinkedIn အပေါ် ?.
ကောင်းပြီ, ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကုမ္ပဏီများမှတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, စော်ဘွား Group မှငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် LinkedIn ပေါ်မှာ။ သို့သော်ငြားလည်း, ကျွမ်းကျင်သူများရှာနေမော်တော်ကားကော်ပိုရေးရှင်း။ မည်သူမဆိုများအတွက်နီးပါးအဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ပရိုဖိုင်းရှိသည်ဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေး။ ငါဒူဘိုင်းမှဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်မှန်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်မေးပမေညျသောကြောင့် ?. နှင့် ထို့နောက်အခွင့်အလမ်းတလျှောက်လာ။ ထိုအသင်တို့သည်အလျှင်းမနှင့်အတူထွက်ခွာသွားနိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအသုံးပြုခြင်း No.10 Step
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ကူညီရန်ဒီမှာပါ!။ ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်နှင့်အတူ စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ သငျသညျကျိန်းသေယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆင်းသက်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရန်ဖြစ်ပါသည် သငျသညျဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တိမရည်မှန်းချက်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအလုပ်စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပေးနေကြသည်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကိုတကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့သူတို့အားလုံးဟာတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူသိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ။ ငါးဆယ်ထောင်ပေါင်းများစွာကျော်ပြီးသားကူညီပေးခြင်း အသစ်သောနိုင်ငံခြားသားများအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့။ အခမဲ့အကြံပေးချက်များနှင့်အဖြေကိုပေး။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါဒူဘိုင်းမှဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖို့ဘယ်လိုနဲ့ သင့်လျော် legit အလုပ် site ကို? ။ ကြောင်းအားလုံးငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစီမံနိုင်သည်။
linkedin ရှိပါတယ် ကြီးမားတဲ့စုဆောင်းမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်အတွင်းကိုသင်ရှာဖွေစုဆောင်းသွယ်ဝိုက်လမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ထံမှ ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူရဲ့ရှုထောင့်။ ဒါဟာအလုပ်ရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျကျနော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း အကူအညီသင်သည်ငှားရမ်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, သင်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် 5,000 စုဆောင်းမှုအမှုဆောင်အရာရှိကျော်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျကျိန်းသေလူမှုမီဒီယာရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ကမ္ဘာနှင့်ချိတ်ဆက်သငျ့သညျ။ ရှာဖွေနေသည် ကော်ပိုရိတ် headhunters တစ်ဦးစကားလုံးအသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါဟာအလွန်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LinkedIn တို့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျဆက်ဆက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုနှစ်ဆ စော်ဘွားအတွက်သင့်လျော်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာ။ ဒီလက်ငင်းမှာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တက်ကြွစွာအသစ်တစ်ခုရှာဖွေနေအဖြစ် အလုပ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း သို့မဟုတ်ပဲယူအေအီးအတွင်းပွင့်လင်းသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစောင့်ရှောက်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ
သငျသညျကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအံ့သြစရာ။ foreground ကအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ join ။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမန်နေဂျာငှားရမ်းဖို့ထည့်ပါ။ သည်အခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ, ပြည်တော်ပြန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုဆောင်အရာရှိ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားလှုံ့ဆော်မှုနေသောစကားပြော။ သို့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအများအပြားအုပ်စုများဖန်တီး အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ WhatsApp ကိုကန့်သတ်အုပ်စုများပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိခြင်းနေကြသည်ကိုသင်ရှာဖွေစုဆောင်းဖို့သင့်တောင်းဆိုမှုကို post နိုင်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအသင်းဖြစ်လိမ့်မည် သငျသညျဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်အလုပ်မရကိုကူညီပျော်ရွှင်ထက်ပိုမို။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အုပ်စုများ၏တဦးတည်းအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရရှိလျှင်။ ဒါကြောင့်ဒီလက်ငင်းမှာ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးစိတ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ သင့်ရဲ့များ၏အမြင်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကို spam များကိုမှတ်ချက်များ post ကြဘူးပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, တဦးတည်းအရာများအတွက်, အရပျ၌ဒူဘိုင်းအားလုံးကိုစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ putten သိရသည်။ ယခုသင်၏ CV ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သို့ ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း rated စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ။ သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့အခြေစိုက်စခန်းရှိရာကြည့်နိုင်ပါသည်။ သင်ကူညီရန်အတွက်ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်ခံရဖို့။ ကျနော်တို့ကိုအီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုနေရာချပါပွီ။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်မှန်ကန်စွာစုဆောင်းအေးဂျင့်များ၏ဤစာရင်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်။ အတိအကျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေသင်ကူညီ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ကြောင်း ဒူဘိုင်းအသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများဖွင့်.
ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား? အဖြစ်အလုပ်အကိုင်ရတဲ့အတှကျခြေလှမ်းများ ကျွမ်းကျင်သူတစ်?။ သငျသညျယခုရှိခြင်းနေကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ ငါဒူဘိုင်းများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား? AZ ခြေလှမ်းများကနေပြည်ပရှိအဖြစ်အလုပ်အကိုင်ရတဲ့ရန်။ သင်အမှန်တကယ်ဗီဇာ, လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ယူအေအီးများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုဘယ်လိုထွက်ရှာပါ။ ကြောင်းအပေါငျးတို့သမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက်ကိုအပိုင်းပိုင်းပေးပါ သငျသညျအလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်။ ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီးပိုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မေ့လျော့မနေပါနဲ့ သငျသညျဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတွေအလုပ်ရနိုင်။ ထိုသူတို့ကယူအေအီးအတွက်ဗီဇာအလုပ်လုပ်ခွင့်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာဂျော့ဘ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။